ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မရယ်ရသော ပြက်လုံးများ”
မင်္ဂလာပါ။ ပထမဆုံးအလည်ရောက်ပါတယ် စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ်ရှင် ။
မင်္ဂလာပါ။ကိုပေါရေ ကျမအနေနှင့် အငြိမ့်ကို တော်တော်ကို ကြိုက်ပါတယ်။ ကိုပေါရဲ့ ဘလော့ကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုမယ့်ဟာပေါ့။ နေဘုန်းလတ်တို့ ဘလော့ပိုင်ရှင်ပေါ့။
လူတွေကို ဖျော်ဖြေဖို့ ၊ စွဲစောင်မှုရှိဖို့ တာဝန်တွေနဲ့ အငြိမ့်သမလေးတွေဘ၀ကလည်း သိပ်တော့မလွယ်ဘူးနော်။ ဒါတောင်ရှေးကဆိုရင် “ဖက်ခွက်စား” လို့ ခေါ်ရက်ကြသေးတယ်။ ကျွန်မတော့ “မြင့်မြင့်ကြည်” ကြိုက်တယ်။ သိပ်ကြီးလွန်းတဲ့မင်းသမီးတွေတော့ မမီဘူးလေ။
ကျွန်မတော့ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက အငြိမ့်ဆို လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ဇာတ်ပွဲကြည့်ရင် အငြိမ့်ချိန် အိမ်ပြန်အိပ်ပြီး နှစ်ပါးသွား ထွက်တဲ့ အချိန်မှ ပြန်ထကြည့်တယ်။ အခုတော့ အငြိမ့်ကိုလည်း ကြိုက်တတ်လာပြီ။ လူရွှင်တော်ပြက်လုံးထက် ကတာကို ကြည့်တတ်လာပြီ။
ခင်ဗျားကလဲ မညာမတာ ပြောတာပဲဗျ ကျုပ်လဲကြည့်မိပါတယ် မကောင်းပါဘူး ခဏခဏကရတော့လဲဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဗျာ သူတို့ခင်ဗျာ ခင်ဗျားတို့မြောက်ပေးလို့ ဟိုဟာတက်အောင် အကကောင်းလို့ မြန်မာပြည်ပြန်လို့မရပဲ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ရွာလယ်နေတာလဲကိုချင်းစာဦးမပေါ့
ဟုတ်ပါ့ကိုပေါရေ။ ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ အနုပညာ တော်တော် နိမ့်ကျလာသလိုပဲ။ တစ်ခြားမကြည့်နဲ့။ ဂီတကို ကြည့်ပါလား။ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဆို တာပြတိုက်ထဲ ထားရမလိုဖြစ်နေပြီ။ မြန်မာသီချင်းကို နိုင်ငံခြားသားတွေဖွင့်ပြရမှာ တောင်ရှက်စရာကောင်းနေပြီ။ ကော်ပီတွေကြည့်ပဲ မို့လို။
ကျန်တာတွေလဲ ဒီလိုပါပဲ။ :(
ဖြစ်ညှစ်ပြီး ဟာသတွေထွက်အောင်လုပ် ရတော့ ရသမပါတော့ဘူးပေါ့ လုပ်ကြံပျက်လုံးတွေ လိုဖြစ်ကုန်ပြီ
သူတို့လဲသူဌေးဖြစ်သွားတော့ လုပ်စားတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ နိုင်ငံရေးပျက်လုံးပဲဖြစ်ရမယ်လို့ ခံယူထားရင်လဲပြောင်မြောက်အောင် စဉ်းစား ထိမိအောင်တွေးခေါ်ပါ သီးလေးသီးရယ် ကိုဇာဂနာရဲ့ ပျက်လုံးတွေ လို အဲမြဲတမ်း ဆန်းသစ်နေပါစေ
၈၈ မတိုင်ခင်က ကိုဇာဂနာ ဓနုဖြူမှာ ပျက်တဲ့ပျက်လုံးကလေး သတိရသေးတယ် အုတ်စီခိုင်းတာ တစ်ယောက်စီလဲသဘောမကျ နှစ်ယောက်စီလဲ သဘောမကျ နောက်ဆုံးဘာပြောလဲဆိုတော့ ဟိုကောင်စီလဲ မကောင်းဘူး ဒီကောင်စီလဲမကောင်းဘူးတဲ့
December 5, 2009 at 12:34 AM
I have never been watched Myanmar movies or့ အငြိမ့် except my childhood.
Also they can not make me laugh.
December 5, 2009 at 3:47 AM
ရေးထားတာကောင်းပါတယ် နအဖ သတင်းစာအာဘော်
လုပ်ရင်ခက်ပါတယ်။ စာဖတ်ပြီးပြောချင်တိုင်းပြောလို့ မရဘူးရှင့် ဘောလုံးကန်တာ(၁၁)ယောက်ပါ
ဝေဖန်တာလူသန်းနဲ့ ချီပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေဖန်တဲ့သန်းနဲ့ 
ကျမကသီးလေးသီးပရိတ်သတ်ပါ။ သူတို့ဟာသာမန်အနုပညာရှင်တွေလိုမဟုတ်ပါဘူး
ကျမကြည့်လိုက်ရတဲ့ သီးလေးသီးပွဲမှာ ရုပ်သေးတွေရာမ
ဇာတ်တော်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို သီးခြားတင်ဆက်ထားတာ တို့ဟာ တွေ့ ရပါတယ် ။ ကျမအံသြမိတယ်. သာမာန်အနုပညာရှင်တွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးကို အများဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ တစ်ပါ။ အခုကိုပေါဝေဖန်တယ် ဆိုတော့ ကျမတော်တော်အံသြမိပါတယ် ။ ကိုပေါသူများကိုဝေဖန်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်အရည်အချင်းရှိအောင် လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါါတယ် ။ အနုပညာကို ဝေဖန်ဆိုရင်တော့ စည်းနှင့် ၀ါးကိုတော့ နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုမယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ကို လူအများဆုံးခြွင်းချက်မရှိ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ လိုမယ်နော်။
ခင်ဗျား ဘလော့က အပေါစားဆန်လိုက်တာ ဗျာ ။ ပြီးတော့ ဟုတ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး ။ ဆီကျင်တာနှင့်ပတ်သတ်ပြီးတော့ အသိပေးထားတာလည်း တလွဲကြီးဘဲ ။ အခုလည်း တလွဲဘဲ ။
ကိုပေါ ရေ... ကိုပေါ ရေးတဲ့ စာတွေ တော်တော်အောင်မြင်တယ်ဗျို့။ပိုက်ဆံမရပဲ အငတ်ခံပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာ ပံ့ ပိုမှုတွေနဲ့ဆရာသမားရဲ့ လုပ်ချင်ဖြစ်ချင်တဲ့ အနုပညာတွေ ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပေးနေတဲ တခုတည်းသော ပြည်ပရောက် မင်းသားကနေပြီး လူရွှင်တော်ဆိုပြီးတွေတာမြင်တာတွေကို ရတဲ့ ပစည်း ရတဲ့ လက်နက်နဲ့ တိုက်နေတဲ့အနုပညာအဖွဲလေးကို အဲ့ ဒီလို တော့ နာမည်မဖျက်ပါနဲ့ ကွာ တက်နိုင်ရင် မင်းတို့ ကတောင်ကူညီရမှာ.မင်းတို့ တိုက်ရမှာက သူတို့ မဟုတ်ဘူး.. သူတို့ ကလခစား မဟုတ်ဘူး.. စီးပွားရေးသမားမဟုတ်ဘူး..အနုပညာသမား...အဲ့ ဒါလေးကိုမင်းနားလည်ပေးပါ ။
ခင်ဗျားဝေဖန်တာကတော့ အရမ်းလွယ်တယ်နော်။ သီးလေးသီး အပြင်ကို ထွက်မလာခင်တုန်းက ကိုဇာဂနာ တပည့်တွေဆိုတော့ မျက်နှာလုပ်ချင်လို့ ဟိုကခေါ်ချင်၊ သည်က ခေါ်ချင် တဲ့ လူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ လက်ချိုးရေလို့တောင် မရဘူးဗျ။
အခုကျတော့ တမ္ဘာလုံးက မြန်မာတွေ သုံးချင်သလိုသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ သီးလေးသီးဆိုတာ နယ်စပ်လို နေရာမျိုးမှာ ကူညီမယ့်သူမရှိဘူး။ သူတို့မှာ မရှိ၊ ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ စားပြီး ရပ်တည်နေကြရတာ။ ခင်ဗျားတို့ အဲဒါ သိလားဗျ။ ကျုပ်တို့က မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မို့လို့ပြောတာပါဗျာ။
အခု ခေတ်မှာ ဘယ်အငြိမ့်အဖွဲ့ကများ သီးလေးသီးလို ဒဿဂီရိ ပန်းစိုက်အက၊ ဦးရွှေရိုး နဲ့ ဒေါ်မိုး၊ နှစ်ပါးသွားအက၊ တခန်းရပ်ပြဇာတ် တွေကို ကပြနိုင်လို့လဲ။ ခင်ဗျားတွေ့ဖူးလား။
ခင်ဗျား ဘိုးအေလက်ထက်က ဟာတွေ နဲ့ သွားမယှဉ်နဲ့ဗျို့။ ခင်ဗျားဝေဖန်တာက စည်းလွတ်ဝါးလွတ်နိုင်လွန်းတယ်။
သီးလေးသီးအငြိမ့်ကို အပြင်မှာ သူများတွေ ဝေဖန်တာကြားဖူးပေမယ့် ခင်ဗျားဝေဖန်သလို အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဝေဖန်တာမျိုးတော့ တခါမှ မကြုံဖူးဘူးဗျာ။
what kind of man you are?
you always see to others negative views.
are u perfect also?
as you know " nothing is easier than fault-finding "
you are just talker, my man.
ဘလော့မှာ သိက္ခာမရှိတဲ့ ဆောင်းပါတွေကိုရေး
မလုပ်ပါနဲ့ လားဗျာ ခင်ဗျားကောတိုင်းပြည်အတွက်ဘာတွေအကျိုးပြုခဲ့ပြီးပြီလဲ
စည်းနဲ့ ဝါးကိုတောင် မြင်ဘူးရဲ့လား
စက်ာပူမှာ နအဖလိုလို နိုင်ငံရေးသမားလိုလိုလှေနံ
နှစ်ဖက်နင်း သူများအတင်းကို ဒိုင်ခံပြော
i accept maymaylay,myo,boe2 .u have not good mind.
criticizing is in every field. everybody has to welcome criticize no matter good or bad.the important thing is that you must be tough stand on your belief. keep up ko paw.
ကိုပေါရေ ... ကျမလဲ လူရွှင်တော်တွေ (ပြက်လုံးတွေ) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတပုဒ်တင်မလို့ ကိုပေါရဲ့ ဒီပို့စ်ကို လင့်ခ်ခွင့်ပြုပါ။
>>>မေဓာဝီ.... မမေဓာဝီ ရေးထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးကာမှ ဒီကွန်မင့်ကို တွေ့တယ်။း-) လင့်ခ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ရေးထားတဲ့ ပို့စ်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပေါ ပေါ ပေါ ပေါ ပေါ ပေါ ပေါ ပေါပေါ ပေါ
နာမည်ကလဲပေါ စိတ်ကလဲပေါ လူပုံကလဲပေါ
ပေါ ပေါ ပေါ ပေါ ပေါ ပေါ
December 23, 2009 at 5:28 AM
လို့ အများခေါ်တယ် ပေါချာချာလူတယောက်ရယ်
December 28, 2009 at 8:43 PM
ဒီလို ရိတိတိ ဆောင်းပါးရေးတာနေမှာ...
စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်သလို ဘာလိုလိုနဲ့ တကယ်တော့ အကောင်းမမြင်တတ်လို့ မြန်မာပြည်ကလူတွေနဲ့ သဘောထားချင်းတူသယောင်ရှိပေမယ့်..
တကယ်တော့ ခများက လူတိုင်းကို မုန်းနေတာ..အရိပ်နေနေအခက်ချိုးချိုး ခများက ဘယ်သူမျက်နှာမှ ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး...ဒီလိုမျိုးစော်ကားပါ ခများ အလှည့်ရောက်တော့မှ ပြေးမပုန်းနဲ့ဗျို့...
သူများသွားမပြောနဲ့ ကိုယ်ကကော ဘာစောက်ဆင့်ရှိလို့ လဲ အနုပညာကိုမင်းဘယ်လောက်နားလည်သလဲ
အာမချောင်စမ်းပါနဲ့ကွာမင်းအကြောင်းငါသိပါတယ်။
ဗရမ်းဗတာ ဝေဖန်လို့ မရဘူး
မင်းအနုပညာစိတ်ရှိရင် သူတို့ ဆီဖုန်းဆက်ပြီး